दुई महिनाको छोरालाई कलेजो दिएर बचाउने महेश ‘छोरालाई जीवन दिएँ, अब भविश्य दिनुछ’!(हेर्नुहोस भिडियो सहित )
विवाह गरेको चार वर्षसम्म महेशप्रसाद र गीता अवस्थीले नको रहर त उनीहरुलाई पनि थियो । तर गीता काठमाडौं बसेर अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गर्दै थिइन् । महेश बैतडीमा रेडियो सञ्चालनमा व्यस्त । त्यसैले उसन्तान जन्माएनन् । यसबीचमा समाज र आफन्तहरु उनीहरुलाई प्रश्न गर्थे– बच्चा कहिले ?सन्तानीहरुको योजना थियो, गीताको एमएको पढाइ सकिएपछि
साबधान ! भारतबाट काठमाण्डौ लगायत विभिन्न ठाउँमा अवैध रुपमा बर्डफ्लु स’ङ्क्र’मित कुखुरा भित्रिन थाले !
भारतबाट राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा मासुका लागि तयार कुखुरा र चल्ला अवैध रुपमा भित्र्याउन थालिएको छ । नेपालमा कुखुराको मासु र चल्ला महँगो भएको मौका छोपी भारतबाट अवैध रुपमा यस्ता बस्तु भित्र्याउन थालिएको हो ।काठमाडौं पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार यही साता मात्रै चितवनको रामनगर हुँदै भारतबाट काठमाडौं ल्याइएको आशङ्कामा मासुका लागि
जान्नुहोस : कुन राेगका कारण कहाँ आउँछ डण्डिफाेर ? हटाउने सजिलाे तरिका
निधारमा डण्डिफोरः निधारमा डण्डिफोरका कारण पाचनमा गडबडी अथवा आहारमा पानीको कमीका आउने गर्दछ । पाचनमा गडबडी र आहारमा पानीको कमीले शरिरमा टक्सिनको निर्माण हुने गर्दछ । यसबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आहारमा एन्टीअक्सीडेन्टयुक्त खाद्य पदार्थका साथै ग्रीन टी र पानीलाई भरपुर मात्रामा समावेश गर्नुहोस् । यसका साथै सोडा र डेरी
सरकारी अस्पतालभित्रै ५ रुपैँयाको मास्कलाई सय रुपैयाँ, विभाग भन्छ हो र !
ग्लोवल कलेजमा एमबीएमा अध्ययनरत रक्षा खनाल सर्जिकल माक्स खोज्दै वानेश्वरको सिभिल अस्पताल परिसरमा पुगिन् । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण स्यानिटाइजर र सर्जिकल माक्स खोज्न निस्कएकी खनालले अस्पतालभित्रको औषधि पसल पुगेर पाँच रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई एक सय रुपैयाँमा किनिन् । ह्याण्ड वासर र स्यानिटाइजर भने वानेश्वर भरका मेडिकल पसल चहार्दा पनि
कोरनाले आतंक मच्चाइरहेका बेला, नेपालमा छिर्यो यस्तो रोग, मान्छेहरु भटाभट बिरामी परे !
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ करेलीकाँडामा मौसमी फ्लुको आशङ्का गरिएको अज्ञात रोगका कारण विद्यालयनै बन्द गरिएको छ । एक सातादेखि गाउँमा फैलिरहेको भाइरलका कारण विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेजस्तो समस्या देखिएपछि गाउँमा रहेको लेखनाथ आधारभूत विद्यालय बन्द गरिएको हो । विद्यालयले एक सूचनाजारी गर्दै विद्यालय बन्द भएको जानकारी गराएको
सावधान रहनुहोस : नेपालबाट फर्केपछि स्पेनमा कोरोना भाइरसबाट एकको मृत्यु !
स्पेनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । उनको गत फेब्रुअरी १३ मा मृत्यु भएको डेलीमेलको समाचारमा उल्लेख छ । मृतकले हालैमात्रै नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्यालेन्सियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले ती व्यक्तिको मृत्यु कोरोना भाइरस संक्रमणबाट भएको पुष्टी गरेका छन् । नेपाल भ्रमणगरेर फर्केपछि ती व्यक्ति बिरामी भएर
कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा चैत ५ भित्र सक्न मन्त्रालयको निर्देशन !
शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा चैत ५ गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यालयलाई सतर्कता अपनाउन पनि भनेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मंगलबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र नेसनल प्याब्सनको प्रतिनिधि तथा सरोकार पक्षलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन
नियमति खानुहोस एक तुलसीको पत्ता,हुनेछ यस्तो अपत्यारिलो फाईदा ! शेयर गर्नुहोला
१. तुलसीको प्रयोगले छातीमा चिसो लाग्न पाउँदैन । यदि चिसो लागेको छ भने कफ निकाल्छ । छातीको दुखाइ पनि कम गर्छ । तुलसीको अद्भूत क्षमताले स्वास प्रणालीको झिल्लीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । २. निमोनिया वा मलेरियाको ज्वरोमा तुलसी र मरिचको तीन दाना एक चम्चा पानीमा घोलेर केही दिन पिउँदा
जानी राख्नुहोस : आँखा कमजोरी, क्यान्सर र पाइल्सबाट छुटकारा पाउन मरिच सेवन उपयोगी ! पढेर शेयर गर्नुहोला
मरिचलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । मरिचलाई चिया ,अचार, तरकारी आदिमा प्रयोग गरिन्छ। जाडो याममा चियामा मरिच राखेर खादा न्यानो गराउन मात्र नभई स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । यी हुन् मरिचका फाइदा मरिचको सेवनले पेटको दुखाई कम गर्न मद्दत गर्छ । मरिचमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल गुणले पेटमा हुने इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । मरिचको
”सुपर फुड” अण्डा खाँदा मोटाइँदैन बरु वजन घट्छ ! जानकारीको लागि शेयर गरौँ
मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न सन्तुलित आहार जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि मानिसले सबै खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ । अण्डामा मानव शरीरका लागि चाहिने अधिकांश तत्व पाइने भएकाले यसलाई प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ । अण्डामा क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन, भिटामिन ए, फस्फोरस, भिटामिन डी, ई तथा जिङ्क लगायतका तत्वहरु हुने गर्दछ । यसले